Madax Doofaar oo la dhigay Masjidka Trollhättan [Sawir] | Somaliska
Masjid ku yaala magaallada Trollhättan ee koofurta waddanka Sweden ayaa subaxii arbacada ahayd waxaa la soo dhigay madax Doofaar oo markaa la soo gooracay dhiigana uu ka daadanayo. Dhibaatooyinkaan ayaa ah mid soo noqnoqota gaar ahaan marka uu soo dhawaado sanadka cusub mana aha markii u horaysay oo dhibaatooyin noocaan ah la inoo gaysto sidaa waxaa yiri Salim oo ah maamulaha Masjidka.
Björ Blixter oo ka tirsan booliska ayaa sheegay in aysan dhacdadaan ahayn markii ugu horeysay ee masaajid lagu weeraray madaxa doofaarka. Waxa uu sheegay in ay mid hore u dhacday oo dhowr masaajid lagu sameeyay. Masaajida keliya ayaa arintaan lagu sameeyaa sida uu sheegay.
Booliska ayaan wali soo qaban qofkii ka dambeeyay ficilkaan.
Illahay ha naga qabto gaalada, awalba nama jecleyn xooggaa ayey na soo dhaweeyeen noona dhoola cadeeyeen, wax ay ku noolaadaan reeraheenuna nasiiyey alleba ha ka soo qaadee. Laakiin si kasta oo ay u yiraahdaan diimuhu waa xor oo qof kastaba wixii uu aamin san yahay xor buu u yaya taasi sax maaha. Mana jecla dhaqankooda waxaan aheyn in ay naga baraan waa tanaa caruurtii nala ka barayo heeesihii julka, geynayana wax ay ugu yeeraan tomten oo ah nin ay weyneeyaan gaaladu, caruurtiina waa taas iskoolkii lacag la,aanta ahaa la yiri xafladiisan kaniisad ha lagu dhigo waana qasab. Wzay rabaan marka anaga maahan caruurteenana caruuurtey dhalaan ayey waxay rabaan inay ayaga oo kale noqdaaan weyna dhacdaa badana. Tusaale u soo qaado waxa ku dhacay muslimiintii wadankaan nooga soo horeeyey aaway Turkidii Swedishii ayey ku milmeen.
wax walbo hala dhigo mahan masjid ay leeyihin muslimita suniga ah waa waa mid shiico waana ka mamnuuc suniga masjidka trollhattan marka taas la socda somalid ayago wax walbo aysan hubsan ayey meel walbo ku dhacda galadana wey ogyihin in uusan suni shaqo ku lehen